Rano Androsterone roah (53-41-8) hplc≥XUMX% | Poitra steroid AAA
/ Products / Ny hafa / Androsterone vovoka
SKU: 53-41-8. Sokajy: Ny hafa
Ny AASraw dia miaraka amin'ny synthesis sy ny fahaiza-manao manomboka amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny Androsterone (53-41-8), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Androtrano volo dia steroid endroogne izay mitranga manerana ny natiora, indrindra amin'ny biby, fa koa amin'ny zavamaniry maro, anisan'izany ireo hazo kesika sy holatra truffle. Izy io dia dingana voalohany amin'ny testosterone, fa amin'ny tenany ihany, somary somary ambany noho ny testosteron ao amin'ny rà. Vokatr'izany, Androsterone dia mahasoa kokoa ho an'ny bodybuilders rehefa nalaina tao anaty tabilao miaraka amin'ny steroids androgenic-anabolic hafa.
Lahatsary vovoka Androsterone
Rano Androsterone roapolo ireo karazana fototra
Name: Androtrano volo
Meny fitetezana 290.44
Rano Androsterone fampiasana vovoka amin'ny tsingerim-panafody steroids
5α-androstan-3α-ol-17-iray. Androtrano vovoka (CAS 53-41-8)
Ny volo Androsterone dia azo alaina amin'ny alalan'ny patch na am-bava miaraka amin'ny capsule. Rehefa mandeha bisikileta amin'ny tenany manokana, ny Androsterone dia tokony haka am-bavany ao 400mg amin'ny dosage isan'andro 600mg na amin'ny transdermally amin'ny 200mg ka hatramin'ny 300mg isan'andro. Rehefa mametraka ny vovony Androsterone, dia tokony hidina ambany ny 200mg amin'ny 400mg, arakaraka ny habetsaky ny steroïde ao amin'ny stack. Ho an'ny dingana voalohany, dia soso-kevitra ny haka ny doka ambany indrindra azo ampiasaina amin'ny hormonina androgenic hormonina ao amin'ny vatana. Amin'ny dingana faharoa na fahatelo, ny doka dia mety hitombo ho an'ny atleta manana fandeferana ho an'ny steroid.
Fampitandremana amin'ny vovobony Andraterôka roah (CAS 53-41-8)
Noho ny herin'ny androgenic ity fanangonana ity, ireo izay manahirana ny baldness ny lahy dia tokony hisoroka io fitambarana io satria ny fahamendrehan'ny volo mangatsiaka dia mety hampidi-doza ho an'ireo izay mety.
Ny volo maitso avy amin'ny Androsterone dia ohabolana maro be azo ampiasaina amin'ny fampiasana azy. Ny fanondranana menaka Androsterone dia nampidirina tao amin'ny dikan-tenin'ny LG Sciences T-911 tany am-boalohany ho an'ny fampiofanana mialoha ny fampiroboroboana azy, ary nampidirina tao anaty diplaoma ambany tamin'ny LG-Sciences Formadrol Extreme teo aloha ho an'ny fanodinkodinam-pandaminana. Amin'izao fotoana izao, both poids androstronone and vardenafil Androsterone dia misy ao amin'ny Test X-Prensom Epi-1.
Ahoana no hividianana volo Androsterone (CAS 53-41-8) avy any AASraw
Ny AASraw dia manome ny fahadiovana Xenumone Andromaeranina volo volo ho an'ny mpanao biriky na laboratoara ambanin'ny tany ho fampiasana am-bava.